WIK 6800 Is Loading Moodhadhka Mashiinka Mashiinka. WIK6800 (Nidaam) Dariiq dhexaad 10T dariiq jiifku dhimay double biriish biriish Engine model Yuchai Power 4108 Boost Taayir. 1670R22.5 Wire cadaadis sare oo labalaab ah oo isku xigta Lagu qiimeeyay awood 91kw Motor. Foomka Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Liquid (xawaaraha isbedelka wareega).) Sida biyaha loo siiyo Haydarooliga banaanka / / waqtiga gudbinta Gearbox. ZL-280 gudbinta isbeddelka isbeddelka Foomka qodobka 7600 x 2950 x 3400mm Gear 4 4 4 gadaal si loo labanlaabo s sare iyo hoose ...
WIK 5500 Is Loading Mashiinnada La Taaban karo
WIK 5500 Is Loading Mashiinka Mashiinka Mashiinka. WIK5500 Sync Axle 25 Gawaarida gawaarida gawaarida labalaabka biriijka birta Mishiinka Yuchai Power 4105 Boost Tire. 12R22.5 Wire-cadaadis sare oo faakiyuum ah oo isku xiga labalaab Lagu qiimeeyay awood 85kw Motor. Oko Radial plunger motor Drive foomka dareeraha dareeraha dareeraha (heerka isbedelka xawaaraha).) Sida biyaha loo siiyo Haydarooliga banaanka / / waqtiga gudbinta Gearbox. ZL-280 gudbinta wareejinta awooda Foomka curiye 7100 x 2750 x 3300mm Gear 4 4 4 gadaal si loo labanlaabo oo lo ...
WIK 4000 Is Loading Mashiinka La taaban karo
WIK 4000 Is Loading Moodhadhka Mashiinka Mashiinka. WIK4000 Axle Super wheel side deceleration double brake Bridge birta Mishiinka Yuchai Power 4105 Boost Tire. 12R22.5 Waayir-cadaadis sare oo faakiyuum ah oo labalaab ah oo safka laba-gees ah Lagu qiimeeyay awood 85kw Qiyaasta haanta biyaha 700L Drive foomka Lique torque beddelaha (xawaaraha isbedelka marxaladda).) Qaabka biyaha loo siiyo Haydarooliga bannaanka / / waqtiga gudbinta Gearbox. ZL-280 gudbinta wareejinta awooda Foomka curiye 7500 x 2750 x 3200mm Gear 4 4 4 gadaal si loo labanlaabo sare lo ...
WIK 3200 Is Loading Mashiinnada La Taaban karo
WIK 3200 Is Loading Moodhadhka Mashiinka Mashiinka. WIK3200 Axle Wareeg weyn oo dhinaca giraangiraha biriijka biriijka biriijka ah Mashiinka Yuchai Power 4102 Boost Taay. 1670-20 Taayirada siligga Lagu qiimeeyay awooda 77.3kw Muga haanta biyaha 400L Drive form foomka dareeraha dareeraha (heerka xawaaraha isbedelka).) Sida biyaha loo siiyo Haydarooliga banaanka / / waqtiga gudbinta Gearbox. ZL-280 gudbinta wareejinta awooda Foomka cabiraca 7000 x 2300 x 2900mm Gear 4 4 4 gadaal si loo labalaabo xawaare sare iyo mid hoose Tayada t ...
WIK 2500 Is Loading Mashiinnada La Taaban karo
WIK 2500 Is Loading Moodhadhka Mashiinka Mashiinka ah WIK2500 Axle Gawaarida yar yar ee gawaarida gawaarida labajibaaranaha mishiinka mishiinka Yunnei Power 4100 Taayirada Supercharged 20.5-16 Taayirada silig bir adag oo lagu qiimeeyo 65kw Taangiga Biyaha mugga 380L Foomka Wareegtada Wareegga (aan dhammaad lahayn) Fasalka ugu sarreeya 35 ° Habka biyo bixinta nuugista Haydarooliga / waqtiga gudbinta Wheelbase 2500mm Gearbox ZL-265 gudbinta wareejinta awoodda Cabirka 6300 * 2200 * 2600mm Gear 4 horay iyo 4 gadaal, labalaab sare iyo ...